သစ်ကောင်းအိမ် – ပဉ္စမထပ်က နှင်းမြူ … | MoeMaKa Burmese News & Media
သစ်ကောင်းအိမ် – ပဉ္စမထပ်က နှင်းမြူ …
(မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၅
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ချစ်စရာအကောင်းဆုံး စစ်ဆုိုလုို့
အဲဒါကတော့ အချစ်စစ်ပဲဗျ …
ခင်ဗျားက လူပျိုသုိုးကြီးဆုိုတော့ အဲဒါတွေ ဘယ်သိပါ့မလဲ.. လုို့
ကျနော့်ရဲ့ အကုိုကြီးသူငယ်ချင်းများထဲက တယောက်ဖြစ်သူ
သူ့စတေးတပ်အောက်မှာ ဝင်နောက်ရင်းနဲ့ …..
မာဖီးယားဂုိုဏ်းချင်း တုိုက်ပွဲဖြစ်ရာက သေဆုံးသွားတဲ့ မာဖီးယားဂုိုဏ်းသားတွေနဲ့
တုိုင်းပြည်အတွက် အသက်စွန့်သွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေကြားက
နီဗာန်နဲ့ငရဲလုို ကွားခြားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဆီရောက်သွား ပြီးတော့ ..
အနိဌာရုံဆုိုးနဲ့ လူတစု အစုလုိုက်အပြုံလုိုက်
ခွေးတွေ ဝက်တွေ အရှင်လတ်လတ် မီးမြိုက်ခံရသလုို ဓာတ်ပုံကုိုသွားတွေ့တော့
အဲဒီ သေဆုံးသူ လူမုိုက်တစုအပါအဝင် စုဝေးဖွဲ့ထောင်ထားတဲ့ လူမုိုက်ဂုိုဏ်းကြီးက တိရစ္ဆာန်တကောင်လုို ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တဲ့
ကျနော့်ရဲ့ အကုိုကြီးသူငယ်ချင်းထဲက တယောက်ဖြစ်တဲ့
ကုိုပါကြီးကုို အလောင်းကုို ပြန်ဖော်တော့
ယူကြုံးမရ ငုိုကြွေးနေတဲ့ သူ့ချစ်ဇနီး မသန္တာရယ်
တဦးတည်းသော ကျန်ရစ်သူ သမီးလေးမျက်နှာကုို
ကျွတ်.. ဆုိုပြီး စုတ်သတ်စရာ
ခင်ဗျားသွားတဲ့လမ်းဘက် လုိုက်သွားကြရှာတယ်ဗျား ….
ခင်ဗျားက အဖြူရောင် အခုိုးအငွေ့သဏ္ဍာန်နဲ့
စအုိုဝ အပြင်ဘက်အထိပဲတဲ့ …. ဗျ ..။